I-Needlework yekhaya ngezandla zakho kusuka ezintweni ezifakiwe. Izandla zokududuzeka ekhaya.
senza ikhethini ngezandla zethu
Umsikazi ngamunye kufanele abe nezinyathelo zakhe siqu ezakha "imilingo yasemakhaya" yangempela, ephendukela egumbini elivamile ukusuka ekamelweni elingaphansi ukuya esidlekeni esifudumele nangobuhle, lapho ufuna ukubuyela khona futhi. Wonke umuntu unomama noma ugogo owasebenzisa zonke izinto ukusebenzisa - u-anyanisi owomile emigqeni yakudala ye-kapron, ama-groats kanye nezikhathi zokugaya ezitsheni ezisetshenzisiwe, izimbiza zezimbali ezivela izitsha eziqhekekile ... Isithombe esivamile? Ukwenziwa ngesandla ngezandla ngezandla zabo akusizi nje ukugcina imali ekuhlobiseni okubizayo, kodwa futhi ukusiza amakhono awusizo azoba usizo esikhathini esizayo.
Izindwangu "I-Cafe Enhle"
Amakhethini amancane "I-Sweet Cafe" ilungele ikhishi elincane. Bayosiza ukudala isimo esimnandi futhi banikeze ikhekhe elikhethekile ngisho nekamelo eliphansi kakhulu. Ngisho nkosikazi we-novice uzokwazi ukwenza amakhethini anjalo ngezandla zakhe.
ukuthunga intambo ngethoni yendwangu enkulu
isepha yama-chalk noma esomisiwe
Linganisa inani elidingekayo lesendwangu, esekelwe ububanzi nokuphakama kwewindi. Kumkhakha ophumela, engeza amasentimitha angu-5 ukusuka enqenqemeni engezansi kanye nesabelo esincane se-top seam (1-2 cm). Ukuze kube yilapho ezayo engxenyeni engenhla yamakhethini, umdwebo wendwangu engu-23 cm obukhulu futhi ubulingana ubude kuya kwendwangu evamile kuyadingeka.
Iphaneli kanye nokubhebhezela engxenyeni engenhla kumele kukhishwe, ukuphonsela ingxenye ngayinye ebangeni, uma kunesidingo. Yenza ithempulethi evela ephepheni elingenqatshelwe. Cindezela kusukela ekugcineni kuka-6 mm ukuya ku-3 mm ngokufaka ngakunye ohlangothini olungalungile ocezu oluphezulu. Qinisekisa indwangu ngokuthunga izikhonkwane bese uqamba.
Namathisela engxenyeni engenhla iphaneli ngobuso bese uvumelanisa imiphetho engagciniwe. Namathisela iphethini ephepheni kwendwangu, okwenza i-indent 1 cm kusuka emaphethelweni phezulu. Vala iphethini ngezikhonkwane zesiNgisi. Isikhwama noma ucezu lwesepha omdala omisiwe nxazonke. Vula iphethini bese uyibeka eceleni.
Vala indwangu ngezikhonkwane bese uhlakaza izingxenye, uthunga nxazonke emigqeni ekhonjiwe eceleni kwezingcezu ezihlangothini kuze kube phansi kwendwangu.
Sula emigqeni ephawulwe bese ususa inothi. Sika enqenqemeni elungisiwe, ushiye cishe u-1 cm ukuze uthole isabelo kulo lonke uhlaka.
Yenza ukubhekwa kwendwangu, ukugcina ibanga ukuya emgqeni kungaphansi kwe-3 mm. Sika izingxenyana zezimali ezisezintweni ezivela phezulu kwezinyo ngalinye.
Sula isiqeshana esiphakeme, uhambisane ngokucophelela emaceleni bese ucindezela imiphetho ephathwayo. Kulula futhi usheshe ukuqondisa izingqimba ngokusebenzisa iphuzu lesikisi noma ukushaya izinaliti.
Cindezela emaphethelweni angu-6 mm ngaphasi kokusekelwa ngu-3 mm ukufaka ngamunye, kuphephile ngezikhonkwane bese uyigxilisa. Yenza nazo zonke izigodi ezungeze umkhawulo wephaneli.
Cindezela engaphansi kwe-2 cm emaphethelweni angaphansi kwekhawenda elizayo 1 cm kokuhlanganisa ngamunye. Sondeza ngokuzenzakalelayo imbobo "yembuzi".
Sula isikhumbuzo esingaphansi kwe-4 cm kusuka phezulu kwezinyo ngezinyawo bese ubamba "imbuzi" ngesigxobo.
Sula izinkinobho ngakwesokunene kwekhawuni ku-loop ngamunye u-5 cm kusuka phezulu. Ukuze uthole umphumela wokuhlobisa ngokwengeziwe, ungadonsa izinkinobho ezinkulu ezizobukeka zivela kude.
Iseluleko esiwusizo: ukwenza ikhethini libe lihle futhi lingene ngaphakathi, nangaphandle, faka i-lining kuso, ngaphandle kokuthunga phansi kwephaneli. Khona-ke ikhethini lizobukeka ngokulinganayo futhi ukukhwabanisa isandla kuzobonakala ngisho nasemgwaqweni.
Yiziphi izinhlobo zezinhlamvu
Ama-Raglan aqoqa entanyeni
Imibono yokuqala ye-Easter: siphuca amaqanda ngePhasika ngezandla zethu
Yini ongayenza nge-jeans endala?
Indlela yokwenza ngokushesha i-New Year costume yengane?
Senza umuthi wamazinyo wemvelo futhi awusizo ekhaya!
AmaJumpers, abahambahambayo: kuyingozi yini kumntwana?
Izakhiwo ze-Shea Butter nokuthi Ungayikhetha Kulungile
Ungamthola kanjani umuntu wamaphupho akho ku-intanethi?
I-Magnet-snowman kusuka ekuzizwa kuya esiqandisini, isigaba somfundi nesithombe
Uhlelo olunzulu lwesikhumba se-couperose
Amaphutha ajwayelekile avimbela amashiya akho
Rash emzimbeni wengane encane
"Ama-Pink Panthers" anezimpawu ze-BWT esiteji saseRussia seMidlalo ye-DTM
7 izinkolelo mayelana nokuzila nokudla imvamisa
Abesifazane - intuition noma umqondo wesithupha?
Isinkwa saseDenishi sinezimpawu ze-marzipan ne-jam
Indlu ehlanzekile - kulula!
Ukuguguzwa komzimba ngo-September 1: imiklamo engcono kakhulu yomkhosi wesikole
Isidlo se-Southeast Asia